Abaabul Dagaal oo ka bilawday Koonfur Galbeed Daawo Sawirada -
Abaabul Dagaal oo ka bilawday Koonfur Galbeed Daawo Sawirada
Ciidamada MaamulkaKoonfur Galbeed ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogleh ka bilaabay qaybo ka mid ah Gobolada Bay iyo Bakool ee koonfurta Somaliya kaasoo loogu goleeyagay sifeybta Ururka Xagjirka ah ee Al Shabaab Deegaanada ay ka Maamulaan Koonfurta Soomaaliya.
Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Maxamed Xuseen oo booqday Ciidamada dhaqdhaqaaqa wada ayaa ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Wasiirka ayaa sidoo kale ciidamada u sheegay in laga doonaayo inay furaan Wadooyinka ay Go’doomiyeen Al-Shabaab.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa isku diyaarinaya guluf xoogan oo lagu qaadayo dhulka Shabaab ay ka Maamulaan Degaanada Koonfur Galbeed, kaasoo ujeedada laga leeyahay ay tahay sidii looga saari lahaa degaano badan oo ay gacanta Ururka Xagjirka ah ee Shabaab ku hayaan.
Dhinaca kale Guluf kaas lamid ah ayaa waxaa wada Ciidabka Wads jirka ah ee Soomaaliya iyo Amisom oo kasocda Labada Shabeele.
Daawo Diyaar garowga Ciidanka
Related Items:Abaabul Dagaal oo ka bilowday Koonfur Gakbeed, Featured